Sida loo Download Online Videos la Mactubes Alternative ah
> Resource > Mac > Mactubes Alternative: Download Online Video fiican yahay Mactubes
Haddii aad tahay user Mac ah, markaas waxaad ahaan doontaa ogyahay video ah downloaders kala duwan la heli karaa si aad u. Software kala duwan ee suuqa ka dhigaysa in ay aad u adag tahay in la go'aansado ka mid ah in la doorto. Mid ka mid ah hababka ugu caansan ee software isticmaalaa waa MacTubes. MacTubes waa YouTube video downloader, iyo ayaa si fiican loo arkaa sanado badan. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu haysan xaddidaadyo kala duwan - bilowdo, oo keliya YouTube ku shaqayn karaa. Waxay bixisaa waafaqsan ma la websites kale video-saaxiibtinimo, taasoo la micno ah aad arrin ku kooban meesha aad ilaha videos ka heli kartaa.
Waxaa jira, dabcan, waxaa kale oo. Laakiin sida aan kor ku sheegay - sidee ayaad u dooran la doorashada si ka badan oo ku saabsan suuqa? Hababka Mac mar walba waa ay warbaahinta aad u culus, sidaas darteed waxa macno u leedahay inaad doorato weyn software. Si kastaba ha ahaatee, waxaan aad ugu boorinayna in aad baadhid Wondershare AllMyTube for Mac . Wondershare Bixiyaa tiro aad u badan oo ah qaababka dheeraad ah, ma waafaqsan yahay ugu yaraan iyadoo in ka badan hal boqol oo magac weyn website-yada warbaahinta kala duwan. Haddii aad raadinayso ah MacTubes kale oo aad u fiican, markaas aad hadda uun u helay! Waxaad bilaabi kartaa degsado software tan hadda. Dhammaan waxa ay qaadataa waa hab loo xirxiro fudud!
Waa maxay Tani Alternative Mactubes fiican
Iyadoo isagoo si loo soo dajiyo qaar ka mid ah software inuu wax ku sameeyo waxay noqon kartaa in yar oo ka mid ah herdamaysay - iyo sidoo kale aadka u halista ah - ma jirto wax laga walwalo tan kale MacTubes. Waa mid amaan ah, oo shirkadda taas oo loogu in ay leeyihiin sumcad aad u wanaagsan oo dhan internetka. Halkan kaliya yihiin qaar ka mid ah sababaha aad fiirsatid inaad u beddelatid ka MacTubes in AllMyTube for Mac.
Si dhakhso ah kala soo bixi videos oo dhan ka web interface la ah si sahlan loo maareeyo
Dooro ka badan 100 websites kaas oo ku siin kara warbaahinta tayo sare leh - aad qaado ka ugu fiican qaado
Beddelaan kasta oo file video caan ah oo si fiican u buuxinayaan Qalabka telefoonada gacanta ee aad sida iPad ama iPhone ah
Qaado audio kaliya ee ka file video ah, oo aad nafaha lagu meel ku adag-wadid aad haddii aad rabto oo kaliya ama aad u baahan audio ah
Shaqeeyaa oo dhan daalacashada Mac caanka ah sida Safari, iyo taageerada OS X 10.9 Mavericks
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube for Mac in Download Videos
Halkan waxaa ku tillaabooyinka fudud ee aad kala socon kartaa inaad kala soo baxdo videos online ka ah goobaha sida YouTube.
Tallaabada 1 Raadi video ah
Waxaad si uun ku saabsan wax kasta oo video aad jeceshay isticmaalaya AllMyTube u heli kartid. Iyadoo in ka badan boqol website-ka garab YouTube si buuxda u taageeray, waa in aad leedahay dhibaatooyin ka jirin helo video ah oo aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad u helaan videos aad jeceshahay ee Safari, Firefox ama Chrome.
Tallaabada 2 Download vidoes aad
Si aad u soo bixi video ah, si fudud u dul istaagin dhinaca kore ee midig ee video laftiisa oo yar Download button muuqan waa. Riix badhanka iyo barnaamijkan bilaabi doonaan in ay soo bixi video ah.
Haddii kale, waxaad nuqul laga yaabaa URL video oo ka dib ku paste URL button, barnaamijka ayaa sidoo kale bilaabi doonaan in ay soo bixi video isla markiiba.
Fiiro gaar ah: Waxaad ku dari kartaa sida badan videos sida aad jeceshahay in aad safka. Barnaamijkan 10 videos download kartaa isku mar.
Tallaabada 3 Beddelaan aad video
Marka videos waxaa lagala soo bixi, markaas ka dib waxaad iyaga ka arki kartaa sida aad raalli. Si kastaba ha ahaatee, ma dhan soo bixi videos la doonayo in dhakhso ahaan la jaan qaada qalabka mobile. Haddii aad rabto in aad qaadato kuwaas videos bixi ama audio on go aad la, waxaad u baahan tahay in ay marka hore iyaga loogu badalo. Si tan loo sameeyo, si fudud u tagaan si ay ugu soo bixi maktabadda gudahood AllMyTube, oo guji ka badalo button dhinaca midig ee video kasta oo ku qoran. Markaas waxaa lagu weydiin doonaa in aad doorato qaab ku haboon qalab aad iyo riix OK si aad u bilowdo diinta.
Marka habkan la dhamaystiro, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysatid videos meel kasta oo aad rabto adigoo isticmaalaya telefoonka gacanta. Sidee sahlan waa in? Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa guji ah badhamada yar oo aad qabto oo isku dhafan, si buuxda u isticmaali karo video downloader! Maxaad ka hor tegin oo isku day this qalab cajiib ah oo maanta?
iLivid Alternative: Download Online Video fiican yahay iLivid
System Music Open (NOLOL) ee Mac
Adobe Systems: Adobe jilitaankii Pro CS6 u Mac
MacBook Recovery Pro: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga MacBook Pro